January 31, 2021 - ApannPyay Media
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး
January 31, 2021 by ApannPyay Media
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး News.AU မှ ဖော်ပြချက်အရ အသက်၂၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး တစ်ဦးမှာ ခေါင်းကိုက်ကိုက် နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက် မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ UK, Gateshead မှာ မိခင်နဲ့ အတူတူနေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး Jessica Cain ပါ။သူမဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တုန်းက ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မသေဆုံးခင်ညတုန်းက Jessica ဟာ မိခင်ကိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပါရာစီတမောတောင်းသောက်ကာ အိပ်ယာစောစောဝ င်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျတော့ မိခင်ဖြစ်သူက သမီးလေး သက်သာလားမေးမလို့ သွားနှိုးခဲ့ပေမယ့် Jessica … Read more
သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်..နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ?
သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်..နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ? ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သသင့် ရဲ့ ညာ လက်ဖဝါး ကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရေအာင်.. နံပါတ် ဘယ်ေ လာက်လဲ..?ခုပဲ သင့် ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ.. ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော်(၀၁). ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစား အားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး အများအတွက်ထက် ကိုယ့်အ တွက်ကို ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ပါစေ (၀၂). ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသောသူ၊ လူစိမ်းကို ယုံလွယ် သောသူ … Read more
အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ ၁။ ကျောကုန်းလှုပ်မူ အဝတ်ရမည်။ ၂။ ကိုယ်လှုပ်မူ မယားနှင့်အတူ စကားဆိုရမည်။ ၃။ ခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်။ ၄။ ချက်လှုပ်မူ နှစ်လိုဖွယ်သော ဥစ္စာ ရမည်။ ၅။ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။ ၆။ နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူများမည်။ ၇။ နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဥစ္စာပေးလာမည်။ ၈။ မေးဖျားလှုပ်မူ အချင်းများမည်။ ၉။ လည်ပင်းလှုပ်မူ တန်ဆာဆင်ရမည် ၁၀။ အထက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ ရန်ဖြစ်မည်။ ၁၁။ အောက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ အဝေးစကားပြောကြားရမည်။ ၁၂။ အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ မယားနှင့်စကားများမည်။ ဥစ္စာရမည်။ ၁၃။ ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ကျွန်ဖြစ်မည်။ ၁၄။ ဦးရေလှုပ်မူ နာဖျားမည်။ ….. လက်ယာ အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော ၁။ လက်ယာ … Read more
January 31, 2021 January 31, 2021 by ApannPyay Media
မိဘတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးကိုဖတ်ပေးပါ အသက် ကြီးလာတဲ့ အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးဟာနည်းပါး လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲက သွေးနဲ့အစားထိုးပြီးလည်ပတ်ကြရတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်တွေဟာ ငယ်မူ ပြန်သွားပြီ။အဲဒါကိုသူငယ်ပြန်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ကိုယ်တွေလည်းရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်းရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ အဲဒါ အသက်ကြီးတဲ့ သူတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝပါ။ကိုယ့်မိဘတွေလည်းအဲဒီလို ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်စိတ်ဆိုးလွယ်တာ၊စိတ်ကောက်လွယ်တာ၊နေရာတကာ ဝင်ပါတာ မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမှာအိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေဆိုရင်မိန်းမတွေရဲ့သာသာထိုးထိုး ပြောဆိုမှုကြောင့်မိဘတွေအပေါ်မှာအမြင် စောင်းတတ်ပါတယ်။တစ်ချို့ သား၊ သမီးကလည်း”မိဘက မိဘပဲ၊မှားရင်တော့ ပြောရမှာပဲ… “ဆိုတာ မျိုးတွေကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့သဘာဝတရားကြောင့် ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်မယား နှစ်ဦးလုံးဟာနှစ်ဘက် မိဘတွေ အပေါ်မှာအပြည့်အဝ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ မိဘတွေ အဲဒီလို ဖြစ်လာရင်နားလည် မပေးနိုင်တဲ့သား၊ သမီး မျိုးက များပါတယ်။”လူကြီး၊ လူကြီးလို မနေဘူး၊နေရာတကာ ပါတယ် “အစ ရှိသဖြင့်ပြန်ပြီး တုန့်ပြန်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ်ငယ်ငယ်ကခဏ၊ ခဏ … Read more
အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခ *ကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမရဲ့ အဖြစ် ထိုုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးရှိပါတယ်။သူဟာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ကောင်းတုုန်းမှာပဲ ယောက်ျားဆုုံးပါးသွားပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ သားလေးကိုု ဘထွေးနဲ့ မကြုံစေချင်လိုု့နောင်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုပဲ အမေတစ်ခုုသားတစ်ခုုနဲ့ ပဲ သားလေးကိုု ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားလေးလည်း အလွန်လိမ္မာပါတယ်။အမေ့ကိုုလည်း အလွန်သိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုုနဲ့ ဆရာမဝင်ငွေငွေလေးနဲ့ သားလေးကိုုရှိစုုမဲ့စုု ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားကလည်း ထူးချွန်တာမိုု့ အမေရိကန်နိုုင်ငံကိုုပညာတော်သင် စေလွတ်နိုုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာ သားကလည်း ထူးချွန်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလိုု့ အလုုပ်ကောင်းပြီး အမေရိကမှာပဲအိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုုယ်ပိုုင်အိမ်တစ်လုုံး ဝယ်နိုုင်ခဲ့ပါတယ်။မြေးကလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဆရာမကတော့ တာဝန်နဲ့မိုု့ဆရာမအဖြစ်ပဲ ထိုုင်ဝမ်မှာ ဆက်လက်နေထိုုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလုုိနဲ့ ဆရာမကြီးဟာ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာပါတော့တယ်။ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာလေလေ သားနဲ့ မြေးလေးကိုုသတိရလေလေဖြစ်ပြီး သားလေးမိသားစုုနဲ့သွားရောက်နေထိုုင်ဖိုု့ ဆန္ဒပြင်းပြလာပါတယ်။ အမေ့ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သားလိမ္မာကြီးကိုုသတိရပြီး ပီတိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သြော် လုုပ်ဖေါ်ကိုုင်ဘက်တွေ … Read more
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါကသမ္မသဒ္ဓါ – သဒ္ဒါတရားချင်းတူညီ သမသီလာ – အကျင့်ချင်းလည်းတူညီ သမစာဂါ – စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုချင်းလည်း တူညီ သမပညာ – အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ ပညာချင်းလည်း တူညီမည်ဆိုပါက ဤ လင်မယား သည် ယခု ဘဝတွင် ကွဲကွာခြင်း မရှိသည့်အပြင် ယခုလက်ရှိဘဝတွင်သာမက နောက်ဘဝဆက်ဆက်တိုင်အောင် ၁ – အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ခြင်း ၂ – ကိုယ်ချမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာ … Read more
စပါးကြီးသည်းခြေနှင့်ဝက်ဝံသည်းခြေအသုံးပြုပုံ/ အသုံးပြုနည်း ဗဟုသုတအလို့ငှါ စပါးကြီးသည်းခြေနှင့်ဝက်ဝံသည်းခြေအသုံးပြုပုံများအားတင်ပြအပ်ပါသည်။ (စပါးကြီးသည်းခြေ) စပါးကြီးသည်းခြေသည် သဘာဝအားဖြင့် အလွန်ထူးဆန်းသော ဆေးတမျိုးဖြစ်သည်။သက်မဲ့ပင်ဖြစ်နေသော်လည်း ညှို့ဓာတ်နှင့်ဆွဲအားသည် အပြည့်အဝပါရှိနေသည်။ ဉာဏ်ရှိသလောက်လိုသလိုသုံးနိုင်သော ဣစ္ဆာသယဆေးတလက်လည်း ဖြစ်သည်။ဗဟုသုတဖြစ်စေရန် တတ်သိ၊မှတ်မိသမျှ ဆေးပန်းသုံးဟန်ကို ဖော်ပြပါသည်။ (1)မေးခိုင်လျှင်လျှာမှာပွတ်ပေးပါ။ (2)မေးရွှဲလျှင်လိမ်း၍လက်နှင့်တည့်ပေးပါ။ (3)လေငန်းဖြတ်လျှင် တော‌‌ရှောက်မြစ်နှင့်သွေးလိမ်းပါ။ (4)ဆီးချိုဖြစ်လျှင် ဆီးခုံကိုလိမ်းပါ။ (5)ဆီးကျောက်တည်လျှင် ရေစိမ်သောက်ပါ။ (6)မျက်စိနာလျှင် ကွင်းပေးပါ။ (7)ဗိုက်နာလျှင်လိမ်း၍ ချက်အောက်ကိုဆွဲချပါ။ (8)ကိုယ်ပူလျှင် ရေစိမ်သောက်ပါ။ (9)သူငယ်နာအတွက် လျှာနဲ့လျက်ပါ။ (10)လေးဘက်နာဖြစ်လျှင် ဆေးပန်းဥနှင့်လိမ်းပါ။ (11)ကိုယ်ဖောကိုယ်ရောင်ဖြစ်လျှင် ယူကလစ်ခေါက်နှင့်သွေးလိမ်းပါ။ (12)အဆစ်အမြစ်ကိုက်လျှင် ရှောက်ရည်နှင့်စုတ်ပေါက်ပါ။ (13)ဇက်ကြောထိုး၊ဇက်ကြောတက်လျှင် ကွမ်းရွက်ရည်ဖြင့် ရေ။လိမ်းပါ။ (14)ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မီးဖွားရခက်လျှင် စပါးကြီးသည်းခြေညှို့ကြိုးကို ချက်ပေါ်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်တင်ထားပါ။ (15)သူခိုးခြေရာကို စပါးကြီးသည်းခြေ ညှို့ကြိုးနဲ့ထောက် အပေါ်မှငှက်ပျောရွက်နု(ကျီးမနားငှက်ပျောရွက်)နှင့်အုပ်ထားပါ။ခိုးလျှင်တစ်နာရီအတွင်း ၊သုံးနာရီအတွင်း မဖြစ်မနေပြန်လာလိမ့်မည်။(လူမသိအောင်လုပ်ရပါမည်။) (16)ဈေးရောင်းကောင်းလိုသော် သည်းခြေအစုံ … Read more
ခြေဖဝါးကို ဒီလိုကြက်သွန်နီ ကပ်အိပ်ကြည့်လိုက်ပါ
ခြေဖဝါးကို ဒီလိုကြက်သွန်နီ ကပ်အိပ်ကြည့်လိုက်ပါ ညအိပ်မပျော်သူတိုင်း ရောဂါဖြစ်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင် ၁.ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ။အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိသည်။ ၂.နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ၃.ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ ၄.ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပီး ခြေဖဝါအလည်တည့်တည့်ကပ်ပါ။တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက်များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမည်။ Crd ဆေးမီးတို တခုခု ရရင်​​ေ​ကျေနပ်​တယ် ေျခဖဝါးကို ဒီလုိၾကက္သြန္နီ ကပ္အိပ္ၾကည့္လုိက္ပါ ညအိပ္မေပ်ာ္သူတိုင္း ေရာဂါျဖစ္ေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ အိပ္မေပ်ာ္လၽွင္ ၁.ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီး မွည့္စားပါ။အိပ္စက္ျခင္းတြက္ အထူးေကာင္းမြန္းၿပီး အားရွိသည္။ ၂.ႏြားနို့ေသာက္ျခင္းက အရိုးအဆစ္သန္မာသည့္အျပင္ အိပ္စက္ျခင္းကို ျမန္ဆန္ေစပါသည္။ ၃.ၾကက္သြန္ျဖဴေခါင္းအုံးေအာက္၃တက္ထားအိပ္ပါ။ဦးေႏွာက္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး အိပ္စက္မွုကို ျမန္ဆန္ေစသည္။ ၄.ၾကက္သြန္နီထက္ျခက္ခြဲပီး ေျခဖဝါအလည္တည့္တည့္ကပ္ပါ။တစ္ကိုယ္လုံးမွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စုပ္ယူပါလိမ့္မယ္။အေအးမိနာေစးသူ ကေလး … Read more
ခါးနာခြင်းအတွက် သင်္ဘောတစ်ရွက် သင်္ဘောရွက်နှင့် ထန်းလျှက်ခဲ ခါးတွေအရမ်းနာ ခေါင်းတွေလဲတအားကိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေလဲ ခဏခဏ မသောက်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီး အိမ်တွင်းဆေးလေး လုပ်ကြည့်ဖြစ်တယ် ။ သဘောင်္ရွက်လေး တရွက် ခူးလာပြီး ရေနွေးဆူဆူမှာ ခပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ (၃)မိနစ်လောက်ရရင် ထန်းလျှက်ခဲလေး (၃)လုံးလောက် ထည့်ကျို လိုက်ပြီး (၃)မိနစ်လောက်ထပ်ကျို ပြီးရင် အရည်ကျလာပီ အဲဒီတော့ ဖန်ခွက်အကြီးနဲ့ ကိုယ်သောက်နိုင်သလောက်ထိ သောက်ပေးလိုက်ပါ။ သောက်ပြီး (၁၀)မိနစ်လောက်နေတော့ ဆီးခဏခဏသွားလာတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာလဲ ပျောက်လာပြီး ခါးနာတာတွေလဲ သက်သာသွားတယ်။ ခရစ်ဒစ် ခါးနာျခင္းအတြက္ သေဘၤာတစ္ရြက္ သေဘၤာရြက္ႏွင့္ ထန္းလၽွက္ခဲ ခါးေတြအရမ္းနာ ေခါင္းေတြလဲတအားကိုက္ေတာ့ အဂၤလိပ္ေဆးေတြလဲ ခဏခဏ မေသာက္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး အိမ္တြင္းေဆးေလး လုပ္ၾကည့္ျဖစ္တယ္ ။ သေဘာရၤြက္ေလး တရြက္ ခူးလာၿပီး ေရေႏြးဆူဆူမွာ ခပ္လိုက္ပါတယ္။ … Read more